SIDA LOO KORO WAAYEELKA MADOW EE DACHA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Beeridda iyo daryeelka ee elderberry madow
Qoyska waayeelku waxay leeyihiin afartan nooc. Dhulkeena, waayeelka madow waxaa badanaa la beeray.
Waxaa loo tixgeliyaa noocyada kala duwan ee lagu qurxiyo, marka laga reebo waayeelka iyo midabka loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka.
Beerida geedaha ee habboon
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, waayeelka aan laga fogeyn dareenkiisa, waxaa lagu beeray meel u dhow guriga, waxaa la rumaysan yahay in odaygu uu kufilan yahay ruuxyada sharka leh. Si fiican loo beeray iyo geedaha si fiican u dhirta ugu dambeyntii waxay ku farxi doonaan ubax iyo geedka wanaagsan ee berry.
Ma taqaanaa? In wakhtiyadii hore, dadyowga Balkaaniyiinta ah, samaynta cibaadaysi roob ayaa loogu yeedhaa, oo loo isticmaalo laanqaatahoodii rasmiga ah ee waayeelka. Iyadoo ay weheliso dhir kale, waxay dhar gashan yihiin dabacsanaan, dhammaadka cirridka la saaray iyo daadadku.
Doorashada meel loogu beero beeritaanka waayeelka waayeelka
An elderberry ma aha warshad awood leh, laakiin waxay jecel yihiin iftiin wanaagsan. Soo hel aag iftiin leh oo ku yaal dhinaca waqooyi ama dhinaca bari ee dhismaha. Warshadu waxay u dulqaadaneysaa hooska iftiinka ah, laakiin joogitaanka joogtada ee hooska ayaa ka hortagaya horumar dhan.
Waa muhiim! Noocyo Elderberry oo leh caleenta dhalaalaya oo caleenta leh ayaa lagu beeray oo kaliya goobaha qorraxdu, haddii kale geedku wuu lumaa oo lumiyaa muuqaalka qurxinta oo dhan.
Waayeelku wuxuu si fiican ula xiriiraa deriska, ka sokow, sii kordhaya meel u dhow midhaha ama dhirta ubaxyada dhirta iyo geedaha ayaa gacan ka geysan doona iskutallaabta-pollination. Geedkani waxa uu kiciyaa cayayaanka, sidaa daraadeed waxaa badanaa lagu beeraa xiga wadiiqada waddada ama godka compost.
Goorta iyo sida loo beero
Wixii sii kordhaya ee waayeelka madow waxay ku haboon tahay ciidda loamy. Haddii ciidda agagaarkaaga ay tahay asiidh, waxaad ka shaqeysaa lime. Beeritaanka Elderberry waxay dhacdaa guga iyo dayrta, cimilada diiran. Ceelka waxaa la qoday nus mitir qoto dheer iyo bacrinimo leh Bacriminta organic iyo fosfooraska-potassium. Ka hor inta beeritaanka ciidda hoose ee godka waa in la furo. Geedka waxaa la dhigayaa godka, iyada oo aan qoto dheereynin qoorta. Ka dibna ku saydhaa carrada nadiifka ah, iyo dusha sare ee bacriminta iyo tamped. Geedka loo baahan yahay in la waraabiyo 10 litir oo biyo ah, ka dib markii ciidda ay biyo ka soo degto, xidhxidhka seedling-ga. Ilaa geedka uu qaato xidid iyo qaadato xidid, waa in badanaa la waraabiyaa. Sannadka saddexaad ee nolosha, baadiyaha ayaa siin doona midab.
Qaar ka mid ah sifooyinka daryeelka ee elderberry madow
Daryeelista waayeelka ah maaha mid adag, hadba inta uu hayo iftiin ku filan, qoyaan iyo marxalad goynta ah. Warshadani waxay qurxin doontaa beert kasta oo leh midabkiisa, iyo berry khafiif ah oo midab leh oo ku yaala lafaha midabka casaanka ah ayaa qancin doona xitaa dhadhanka ugu casrisan.
Xaqiiqo xiiso leh! Aabayaasheenna, Saaxiibbada, waxay sameeyeen farshaxanno waawayn oo ka soo jeeda laamood waxayna qurxiyeen guryahooda iyo irdaha, deedka iyo dhismayaasha kale ee barxadda. Maalintii Arbacada Ivan Kupala, waaxyaha waayeelka waxay dadka iyo guryahooda ka ilaaliyaan waraaqo iyo ciidamo kale oo madow.
Elderberry si fiican u dulqaadan abaarta, laakiin waxaa la doorbidi karaa in carrada qoyan biyo la'aan. Dhirta dhallinyaradu waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah, dadka waaweynina waxay u dhintaan roob. Haddii kuleylku uusan ku qulqulin roobab, ka dibna waraabin dheeraad ah ayaa lagama maarmaan ah. Gaar ahaan si taxadar leh waxaad u baahan tahay inaad la socoto qoyaanka ciidda inta lagu jiro ugxan-miro. In cimilada qoyan iyo kulul, biyaha hoos mara dooxada 15 litir oo biyo ah toddobaadkii hal mar. Xeerarka asaasiga ah ee waraabinta: carrada hoostiisa hoostiisa waa inaanay engegin. Ka dib markii waraabiyo, ciidda waa in la dabciyo, la nadiifiyaa haramaha, si nidaamka xididada waayeelka ah u neefsadaan si fudud oo aan laga saari karin nafaqooyinka.
Digniin! Si aad u ilaaliso qoyaanka ee ciidda kulaylka xad-dhaafka ah, mulch ee goobada u dhow-dhirta ee warshadda leh chips ama chips qoryaha.
Goorta iyo sida loo quudiyo ciidda
On carrada nafaqo leh oo hodan ah, elderberry horumariyo oo aan bacarimiso. Laakiin guga hore ka dib xilliga jiilaalka avitaminosis iyo xilliga xagaaga ee ubax, bacriminta nitrogen ma noqon doonaa mid adag. Bacriminta adag ayaa ku kala firirsan agagaarka waxayna ku aaseen ciidda by harrow, iyo shuruudaha dareeraha waxaa lagu dabaqaa inta lagu jiro waraabinta.
Laga soo bilaabo Bacriminta organic, digada ama compost, digo digaagga, iyo sidoo kale tincture ee digada iyo qashin ah ayaa la doorbidaa. Bacriminta macdanta ayaa loo baahan yahay haddii dhirta uu si tartiib ah u koray ama daciifay. Xaaladdan oo kale, samee isku dhafan oo isku dhafan oo leh waraabka. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu xoojiyo warshad daciif ah oo leh HOL. Qaadashada nidaamyadan fudud, xagaaga waxaad ku raaxeysan doontaa ubaxyada caleemaha madow, iyo dayrta waxaad soo ururin doontaa goosashada qani ku ah miraha caafimaadka leh.
Guga hore, manjooyin nadaafad ah oo la jilay ama la qaboojiyey ayaa la fuliyaa. Marka shan sano oo shinni ah waa la sameeyaa manjooyin duugmo ah si loogu noolaado duurka hore. Iska yaree, gadaal afar meelood meel ah. Sidaa darteed, laamaha cusub u koraan iyo jilif ee jirridda ku noolaadaan.
Wareeg yar ayaa la sameeyaa si loo sameeyo taajka. Wakhti dheer si aad uga fekerto sida loo gooyo macaamiisha madow maaha mid u qalma. Xitaa haddii aad si qalad ah u qabato wax ka badan intii aad qorshaysay, geedku si deg deg ah ayuu u soo kabanayaa. Muddo dhowr bilood ah, odaygu wuxuu bilaabi doonaa caleemo cusub. Gooyaa waxaa si gaar ah loogu baahan yahay noocyo of elderberry, kuwaas oo midho u dhali. Marka da'da lixda duurka ma sii xirmid miro.
Habka ugu wanaagsan ee lagu dhalan karo miisaanka sabirta madow waa daaqsinka, qaabka abuurka, noocyada iyo guryaha kala duwan oo dhif ah ayaa aad u dhif ah.
Dhiirrigelin by abuur waa wax fudud. Diyaargaroobi ciidda horay, uga saar caws, qooble ku bacriminta, loosen leh qadka. Bishii Oktoobar, ururso abuurka oo sariiraha ku beeran sariiro saddex mitir ah oo fogaan ah 25 cm midba midka kale. Beeraha qoyan. Xilliga dayrta, dalagyada waxay koraan 50 cm.
Wixii guga beero abuurka waa in ay maraan geedi socodka qaabaynta. Ku qoy geedka shan maalmood, si joogto ah u beddel biyaha. Ka dib markaa, ku calaamadee weel hawo leh oo qoyan oo qoyan oo ku kaydi qaboojiyaha illaa laba bilood. Tani waxay hagaajinaysaa biqilka abuurka. Marka uu dhacayo, ka saar qaboojiyaha oo ku kaydi meel qallalan. Beeraha xilliga guga waxaa la fuliyaa si la mid ah sida dayrta.
Gooyn waxaa lagu beeray guga iyo dayrta. Ka hor inta beeritaanka gooyn, ciidda acidic u baahan tahay in la limed ka hor waqtiga (doorbidayaa sanad). Gooyn jarjar 20 cm, oo leh laba ama saddex internodes.
Gooyn Green waxaa lagu beeray xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, rusheeyo carrada leh isku dar ah ciid iyo peat. Marka geedo yihiin xoog leh, waxay yihiin transplanted galay ciid furan. Daloolka waxaa laga sameeyey 50x50, humus, potassium sulfate iyo superphosphate double ayaa lagu darayaa hoos. Sababta dhaadheer ee lagama maarmaan ma'aha. Masaafada u dhexeysa waa inay ahaataa laba mitir. Ka dib markaad degto waxay lagama maarmaan u tahay biyaha.
Gooynta lignified waxaa si dhakhso ah loo beeray meel joogto ah, si la mid ah sida cagaaran. Ka dib markii seedling elderberry madoobaaday ayaa la beeray, waxay u baahan tahay daryeel habboon - waraabinta joogto ah iyo loosening agagaarka jir. Haddii gooyn qoryo aan la beeray dayrta, waa in lagu kaydiyaa qabow iyo beeray guga ee dhulka.
La dagaallanka cayayaanka da 'yarta ah ee madow
Cudurada waayeelka madow sida tan lama garanayo. Dhirta adag ee bukaanku waa mid aan xanuunsaneyn, marmarna lagu weeraro cayayaanka. Si loo ilaaliyo aphids, ku xoortay geedaha waxaa lagu buufin leh sunta cayayaanka horaan guga. Xalka Voloton (20 g halkii 10 l oo biyo ah) wuxuu ka caawiyaa isla isku midka iyo shilinta. Laga soo bilaabo hababka dadweynaha, faleebo ah diirka basasha ama basbaaska gaduudka kulul ayaa loo tixgeliyaa mid wax ku ool ah. Ka dib markii muddo ubax, faleebo isku mid ah ayaa lagu buufiyaa on wax xagta oo budada ah.
Laba jeer sannadkii - ka hor inta aan la jarin iyo ka dib marka fruiting - si looga hortago, duurka ayaa lagu buufin karaa 2% Nitrafen xal. Waxaa lagugula talinayaa inaad tan samayso si aad u burburiso cayayaanka iyo fungi ee lakabka sare ee carrada ama jilif. Xalka copper sulfate ayaa sidoo kale loo isticmaalaa qanjirka. Todoba boqolkiiba xalalka HOL ma aha oo kaliya fungicide iyo cayayaanka ee ilaalinta, laakiin sidoo kale bacriminta nitrogenous ka caawiya horumarka iyo koritaanka warshad.